Ma ogtahay in kansarku uu noqday sababta labaad ee sababa dhimashada adduunka. Tirada kiisaska cusub ee kansarka ayaa la filayaa inay si weyn u kororto tobanka sano ee soo socda. Fadlan hubi wararka CFM maanta. | Jesson
Ma ogtahay in kansarku uu noqday sababta labaad ee sababa dhimashada adduunka. Tirada kiisaska cusub ee kansarka ayaa la filayaa inay si weyn u kororto tobanka sano ee soo socda. Fadlan hubi wararka CFM maanta.
1. Russia Today (RT) waxay qortay in heshiiska dhimista hubka cusub ee istiraatiijiga ah ee udhaxeeya Russia iyo Mareykanka si rasmi ah loo kordhiyay ilaa bisha Febraayo 2026.
2.US: Bishii Janaayo, shaqaalaynta ADP waxay kordhay 174000 waxaana la filayaa inay kordho 50, 000, marka loo eego hoos u dhaca 123000.
3. Bezos wuxuu iska casili doonaa xilka agaasimaha guud ee Amazon wuxuuna noqon doonaa gudoomiyaha fulinta ee guddiga Amazon deyrta 2021. Andy Jassie, oo ah madaxa fulinta ee shirkadda AWS ayaa la wareegi doona, halka Bezos uu xooga saari doono samafalka, Blue Origin Space, the Washington Post iyo arimo kale oo uu isagu jecelyahay.
4. UK FTSE 100 waxay hoos u dhacday 0.14% ilaa 6507.82, Jarmalka DAX30 wuxuu kacay 0.71% ilaa 13933.63, Faransiiska CAC40 wax isbadal ah kuma imaanin 5563.05.
5.Lancet, oo ah joornaal caafimaad oo caan ah oo Ingiriis ah, ayaa daabacay natiijooyinka "Satellite-V" III tijaabinta bukaan socodka ee tallaalka Ruushka ee COVID-19, taas oo muujisay in waxtarka tallaalka satelite-V ee kahortaga cudurka cusub ee coronavirus uu ahaa 91.6 %.
6. Noocyada cusub ee loo yaqaan 'coronavirus virus' ee laga helo Boqortooyada Ingiriiska ayaa mar kale is beddelay. Falanqeyn ka dib, saynisyahano Ingiriis ah waxay ogaadeen in tijaabooyinka qaarkood ay leeyihiin mutation loo yaqaan E484K, kaas oo horey looga helay noocyo kala duwan oo laga helay Koonfur Afrika iyo Brazil. Khubaro ka socota Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee Ingiriiska ayaa sheegay in joogitaanka isbeddellada noocan ahi ku dhacayaan uun tusaalooyinka noocyada cusub ee coronavirus ee laga helo Boqortooyada Midowday (UK) macnaheedu maaha in is-beddelkaasi aad u baahsan yahay iyo in tallaallada hadda la adeegsanayaa ay weli waxtar leeyihiin.
7.Japan camera Imaging Machinery Association: shixnadaha kamaradaha dijitaalka ah ee caalamiga ah waxay noqon doonaan 8.88 milyan oo cutub sanadka 2020, 42% waxay kayartahay sanadka 2019. Kaamirooyinka SLR waxay hoos ugudhaceen 47% ilaa 2.37 milyan, halka kamaradaha aan milicsiga aheyn ay hoos udhaceen 26% ilaa 2.93 milyan. Shixnadaha kamaradaha dhijitaalka ah ee caalamiga ah ayaa la filayaa inay gaaraan 9.53 milyan oo cutub sanadka 2021, kororka 7 boqolkiiba sanadka 2020, laakiin wali wuxuu ka hooseeyaa heerarka cudurka ka hor. Cudurka faafa awgiis, dalal kala duwan ayaa joojiyay isu soo baxyada waxayna hirgeliyeen xaddidaadyo ku saabsan bixitaanka, taasoo keentay hoos u dhac baahsan oo ku yimid dalabkii, iyo shirkadaha kaamirooyinka ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u soo saari lahaayeen kaamirooyin aan milicsiga lahayn oo leh xoogaa dalab ah.
8. Guddiga Qabanqaabada Ciyaaraha Olimbikada Tokyo, Guddiga Caalamiga ee Olimbikada iyo Guddiga Caalamiga ee Naafada ayaa si wada jir ah u soo saaray buugii ugu horreeyay ee ka hortagga cudurrada ee 3-aad, kaas oo sameeyay qodobo aad u faahfaahsan oo ku saabsan ka hortagga cudurrada inta lagu guda jiro Ciyaaraha Olambikada iyo Paralympic, laakiin waxay ahayd si sax ah maxaa yeelay tallaabooyinku aad ayey u faahfaahsanaayeen oo ay aad u adkaatay in kormeer lagu sameeyo.
Afhayeen u hadlay Pentagon-ka ayaa sheegay in Lloyd Austin, xoghayihii ugu horreeyay ee difaaca madow ee dhawaan la wareegay Wasaaradda Difaaca Mareykanka, uu kaga dhawaaqay kulan ay yeesheen hoggaamiyeyaasha adeegyada kala duwan ee milateriga oo la qabtay isla maalintaas in dhammaan waaxyaha ciidanka la xirayo. 60-ka maalmood ee soo socda si looga wada hadlo halista ka imaaneysa awood-sheegashada caddaanka iyo xag-jirnimada la midka ah.
10. Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO): dhammaadka sannadka 2020, 19.3 milyan oo qof oo adduunka oo dhan laga helay kansar iyo 10 milyan ayaa u dhintey cudurka kansarka. Kansarku wuxuu noqday sababta labaad ee ugu sareysa ee dhimashada adduunka, 1/5 dadka dunidana waxay la xanuunsanayaan kansar inta ay nool yihiin. Tirada kiisaska cusub ee kansarka ayaa la filayaa inay si aad ah u kororto tobanka sano ee soo socda, iyo sanadka 2040, tirada kiisaska cusub ee adduunka oo dhan waxay kordhin doonaan 47% marka loo eego sanadka 2020, iyadoo kororka ugu weyni uu ka jiro wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe.
11.Sida ku xusan daraasad cilmi-baaris cudur faafin ah oo lagu daabacay joornaalka Britishka ee Daawada Dabiiciga ah, coronavirus-ka cusub ee go'doomay inta lagu gudajiray COVID-19 safka faafa ee Koonfur Afrika waxaa lagu falanqeeyey ku dhowaad dhammaan hiddo-wadaha, waxaana la helay 16 nooc oo cusub oo fayras ah. dhammaantood waxay leeyihiin isbeddello aan meel kale laga helin hadda ka hor. Habkan kormeerka hiddo-wadaha ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa baaxad weyn Afrika si loo aqoonsado noocyo cusub oo cusub oo ah coronavirus-ka cusub.